Soosaarayaasha albaabka naxaasta ah |China Brass albaabka quful Warshada & Alaab-qeybiyeyaasha
Qufulka Gacanta Albaabka Naxaasta ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah
● Furuhu waa caalami wuxuuna furayaa dhammaan qufullada albaabbada ee xirmada, oo leh 3 fure quful kasta. (Dibadda) waxaa quful/ furay furaha.(Gudaha) waxa lagu xidhi karaa/furan karaa badhanka suulka.Ku habboon qolalka furaha u baahan, sida albaabbada/ albaabada hore.
● Gacan-qabsiga kabaalka ammaanka darajada sare ee waajibka culus waxaa ku jira gacan rogaal celis ah oo ka dhigaysa mid ku habboon in lagu rakibo albaabbada gacanta bidix ama midig.
● Midabka: Naxaasta wasakhaysan.Waxyaabaha: daawaynta zinc adag.Qaybo fudud oo lagu rakibo kuwaas oo badbaadiya wakhtiga rakibaadda, heerka ANSI Class 3, oo noqon kara Wareegto in ka badan 200,000 jeer.
● Latch la hagaajin karo oo leh Backset 60mm(2-3/8") ama 70mm (2-3/4") Saxanka daboolku waa afar gees, lamana saari karo.
● Haddii ay jirto wax dhib ah oo xagga tayada ama tirada ah ee alaabta aad helayso, fadlan nala soo xidhiidh oo waanu ku bedeli doonaa ama ku siin doonaa lacag buuxda.
Qalabka Jikada Shiinaha ee Qalabka Jikada Jikada
QURUX IYO SHAQO - Iyada oo leh naqshadeeda casriga ah ee ugu yar, Gacan-qabashada Albaabka Qarsoonnimadayadu waxay bixisaa qaab iyo ammaan halka loo baahan yahay quful gaar ah.Waxay ka dhigaysaa xal qalab weyn oo albaabbada gudaha iyo dibadda ah - codsiyada ganacsiga ama degaanka.
KU HABSADAY DHAMMAAN HEERARKA ALBAABKA - Gacan-qabsigan albaabka waxa uu leeyahay muuqaal hoose, caato ah, qaab laba jibaaran oo leh weeraryahan gees-jibaaran gaar ah.Waxay ku qalabaysan tahay dabool la hagaajin karo oo ah 60/70mm taas oo loogu talagalay inay ku habboonaato dhammaan cabbirrada albaabka caadiga ah inta u dhaxaysa 1-3/8 inch iyo 1-3/4 inch.
Mashiinka mortise naxaas quful naxaas qadiimiga ah ee albaabka laga soo galo
Dhammaadka Naxaasta Satin ee Tayada Sare leh
Shaqada: Qarsoonaanta (Sariirta & Qubayska)
Gacanta: Ma jiro - Shaygani waa loo rogi karaa isticmaalka gacanta midig ama bidix
Latch la hagaajin karo oo ku haboon 2-3/8" iyo 2-3/4"
Ku habboon 1-3/8" ilaa 1-3/4" albaabada qaro weyn
Qufulka albaabka kabaalka gudaha ee farsamada aamusan ee soo saaraha
Lagu dhammeeyay naxaas dhalaalaysa oo loogu talagalay albaabada gacanta bidix ama midig
ANSI Fasalka-3 Waa loo shahaado amniga deegaanka
Ku habboon 2-3/4-inch iyo 2-3/8-inch backsets;Ku habboon 1-3/8-inji iyo 1-3/4-inch albaabbada qaro weyn
Qufulka Qarsoonnimada;quful gudaha ah oo leh badhanka leexashada iyo muujinta dalool nadiifinta oo ku yaal buro/ kabaal si ay u oggolaato in degdeg lagu sii daayo ciddi ama shay la mid ah.
5-Sannad xaddidan makaanik/5-Sannad xaddidan dhammayn
Qaabka qadiimiga ah ee raaxada ee Dahabka naxaasta ah ee gaarka ah ee albaabka marinka
Si loogu isticmaalo albaabbada gudaha oo aan u baahnayn wax quful ah, sida albaabbada hoolka ama armaajooyinka
Gacan-siinta caalamiga ah;ku habboon labada gacanta midig iyo albaabbada bidix
Waxay muujisaa dabool la hagaajin karo oo ku habboon dhammaan diyaarinta albaabka caadiga ah
ANSI/BHMA fasalka 3 waa la shahaado
Waxaa ku jira dhabarka dambe ee la hagaajin karo si uu ugu habboonaado dhammaan diyaarinta albaabka caadiga ah
Walxaha naxaasta ah ayaa kor u kacay qufulka albaabka gacanta ee dahabka ah ee guriga
Nooca gacanta: Koob
Mechanical mortise naxaas gacanta qufulka naxaasta qadiimiga ah ee albaabka
Midabka: Satin Brass
Naxaas quful albaabka weyn ee raaxada albaabka quful albaabka silinada naxaasta
Waxay ku habboon tahay marinka marinka albaabka qolka fadhiga ee hoolka guriga guurguura, kaas oo si fudud loogu rakibi karo biraha dhowr daqiiqo gudahood
Si fudud loo rakibo qufulka albaabka ayaa leh qaab garaaf ah oo ah buug-gacmeedka rakibidda kaas oo ah qormo la rakibo
Codsi ballaadhan, muuqaal caadi ah, oo ku habboon fasallada, qolalka hurdada, albaabbada laga soo galo, qolalka kaydinta, musqulaha, iwm ee aan isticmaalin qaababka
Naqshad gaar ah markaad gudaha ku jirto, riix furaha qolka si aad u quful, oo taabo gacanta si aad si toos ah u furto. Waxaad xidhi kartaa jaakadda degdega ah si aad u furto marka aad dibadda joogto
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid gambaleellada albaabka, fadlan nala soo xiriir adiga oo farriin uga tagaya.Waxaan ku siin doonaa xal kaamil ah 24 saacadood gudahood
Ku habboon 40mm ilaa 70mm albaabka qaro weyn ee hudheelka dahabka ah ee albaabka qufulka
Albaabka albaabka Abbey ee naxaasta ah ayaa loo isticmaali karaa albaabada gudaha halkaas oo loo baahan yahay shaqo quful gaar ah, sida qolka jiifka ama albaabka musqusha
Albaabka albaabku waxa uu leeyahay gacan-siinta caalamiga ah waxana lagu rakibi karaa labada gacmood ee midig iyo bidixda
Latch wuxuu leeyahay dhabarka dambe ee la hagaajin karo 2-3/8 ilaa 2-3/4 inji si uu ugu habboonaado dhammaan diyaargarowga albaabka caadiga ah
guntida sirta ah ayaa si fudud ugu rakibta daqiiqado gudaheed iyadoo wadata kaliya kaashawiito;Albaabkan qufulka ah waxa uu la kulmay ANSI/BHMA shuruudaha shahaado 2
GD Qalab leh ilaalinta alaabta Microban waxay joojisaa microbes albaabka ilaalinta qalabka 99. 9% ka nadiifsan sagxadaha aan la ilaalin
Albaabka Qolka jiifka ee Hardware Qalabka Guryaha Gacanta Ku Haya Naxaas Square Mortise
[Guryaynta Birta Aan Lahayn iyo Silinder Naxaasta ah] kabaalka albaabka waxa uu ka samaysan yahay bir aan tayo sare lahayn.Oogada gudaha waa naxaas.Dhululubada qufulku waa 100% naxaas ah, kaas oo aan miridhku adkaysan oo loo dhisay si uu ugu adkaysto boqollaal kun oo wareeg ah.
[Latch Anti-theft] Qabashada dhumucdeedu si gaar ah loo nashqadeeyey waa ka-hortagga tuuganimada.Waxaa laga xiri karaa labada dhinac, iyadoo dhinac lagu xiray badhanka leexashada, dhinaca kalena lagu xiray furayaasha.Marka gudaha laga soo xidho, albaabka dibadda lagama furi karo.
[Ku habboon Albaabada badankooda] Iyada oo la isku hagaajin karo: 2-3 / 8 "ilaa 2-3 / 4" (60mm-70mm), waxay ku habboonaan kartaa noocyo kala duwan oo albaabbada caadiga ah oo dhumucdiisu tahay 1 "ilaa 2" (25mm- 50mm).
[Wide Applications] Albaabka albaabbada leh ee furaha laga soo galo waxay ku habboon yihiin albaabka hore, qolka jiifka iyo qolalka aad u baahan tahay in lagu xidho gudaha oo dibadda laga furo.
[Si sahlan loo rakibo] Qalab dhamaystiran ayaa la bixiyaa oo si fudud ayaad u rakibi kartaa kabaalka albaabka adoo raacaya tilmaamaha ku lifaaqan.Looma baahna in rakibe xirfadle ah uu qabto shaqada.